Prof. Jawaari oo hanjabaad adag u jeediyay Golaha Baarlamaanka iyo Xildhibaanada oo Hanjabaadaasi ka walaacsan – idalenews.com
Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa uga digay xildhibaannada Soomaaliya inay eedeeyaan Mas’uuliyiin iyo dad kale, iyagoo caddeyn u haynin eedeymaha ay jeedinayaan.
Jawaari oo ka hadlayay kalfadhigii Baarlamanka ee ayaa shalay sheegay in xildhibaankii eedeyn u geysta mas’uul dowladeed ama shakhsi uusan ku caddeyn karin waxa uu sheegay in laga qaadayo xasaanadda, isla markaana dacwad lagu soo oogi doono.
Wuxuu intaas ku daray in xasaanadda xildhibaannada ay leedahay xad, qofkii ka gudbana sharciga lagu qaadi doono.
Qaar ka tirsan xildhibaannada baarlamanka ayaa horey warbaahinta uga sheegay eedeymo ka dhan ah Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamanka ayaa dhanka kale ku baaqay in xildhibaannada ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa dhaq-dhaqaaqa Siyaasadda xisbiyada, si loo helo mustaqbalka Hoggaamiyeyaal bulshada ka soo dhex baxa.